Pharyngitis ရောဂါလက္ခဏာများ Bezzia
တိုနီတောရက်စ် | 09/06/2021 23:55 | ရောဂါများ
ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ရင်တောင်မှ ဤဝေါဟာရများကိုမကြာခဏခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုအသုံးပြုကြသည် တူညီသောအရာကိုဖော်ပြရန်၊ အမှန်တရားမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ လည်ချောင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂလင်းတမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ၄ င်းသည်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်သည်အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ဂလင်းဂလင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် Pharyngitis ဖြစ်တဲ့အခါ, အတိအကျဘာဖြစ်ပျက်သည် pharynx ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ် တစ်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်။ ဤရောဂါကူးစက်မှုသည်ဂလင်းတမျိုးနှင့်လည်ချောင်းareaရိယာတစ်ခုလုံးတွင်ပြင်းထန်သောရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နာကျင်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ မျိုချရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ပါတ်ခန့်ကြာမြင့်သောအဆင်မပြေမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။
1 pharyngitis ၏လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
1.1 pharyngitis များအတွက်ကုသမှု
1.2 pharyngitis ကာကွယ်တားဆီး
အစာအိမ်နာနှင့်လည်ချောင်းနာရောဂါများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအဓိကအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားသည့်အခါရောဂါတစ်ခုစီတွင်ရောဂါလက္ခဏာများမပေါ်ပေါက်စေရန်တားဆီးရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Pharyngitis ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအပြင်ဆေးရုံသို့သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှင်းလင်းစေသောပiotိဇီဝဆေးတစ်မျိုးကိုပေးပါ.
ဤရွေ့ကား pharyngitis ၏ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည် ၎င်းသည်သင့်အားရံဖန်ရံခါနာကျင်ကိုက်ခဲသောလည်ချောင်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်သည့်ကူးစက်မှုတစ်ခုနှင့်ခွဲခြားရန်ကူညီနိုင်သည်။
လည်ချောင်းနာ: အဆိုပါ လည်ချောင်းနာ ၎င်းသည် pharyngitis ၏အဓိကနှင့်အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သင် ap သတိထားမိနိုင်သည်လည်ပင်းတစ်လျှောက်ပြင်းထန်သောဖိအား၊ ဂလင်းတဝိုက်အလယ်areaရိယာ၌တည်၏။
ရောင်ရမ်းဂလင်းတမျိုး- အဖုအပိမ့်ထွက်သောအခါဂေါ်ဖီထုပ်ကိုထိခိုက်။ ပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည်။ ဘာလဲ ပုံမှန်မျိုခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်တံတွေးမျိုကိုရိုးရိုးလေးဖြင့်ပင်နာကျင်စေနိုင်သည်။
အဖျားရောဂါကူးစက်မှုသည်အဖျားတက်ခြင်းနှင့်အထွေထွေအားနည်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြွက်သားနာကျင်မှုနှင့်အားနည်းခြင်း။ ဤလက္ခဏာများသည်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
လည်ပင်း၌ရောင်ရမ်း lymph node များ: လည်ပင်းရှိ lymph node များကိုလည်ပင်းနှင့် pharynx နှင့်တွဲနေသောအောက်ပိုင်းမေးရိုးများတွင်တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ ရောဂါကူးစက်မှုသည်သိသာထင်ရှားပါကဆုံမှတ်များသည်အလွန်ရောင်ရမ်းလာနိုင်သည် အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမြင်နိုင်ဖြစ်လာသည်.
pharyngitis ကုသရန်တစ်ခုတည်းသောထိရောက်သောနည်းလမ်းမှာသင်၏ဆရာဝန်ထံသို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်သောကုသမှုကိုချမှတ်ရန်အတွက်အထူးကု pharyngitis ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပြproblemနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မကုသနိုင်ခြင်းသည်နာတာရှည် pharyngitis ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကုသမှု၏စားသုံးမှုမှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ် တိကျတဲ့ပantibိဇီဝဆေးအဖြစ်နာကျင်မှုသက်သာရာ.
အရည်များမြင့်မားစွာစားသုံးခြင်းသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာဖျားခြင်းကြောင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေသည်။ ထို့အပြင်မျိုချရန်အခက်အခဲမှာရက်အနည်းငယ်အတွင်းအစိုင်အခဲအစာတစ်စုံတစ်ရာမယူနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ပူပြင်းသည့်အရည်အစားအစာများ၊ အလွန်အာဟာရရှိသောဟင်းရည်များ၊ ဗီတာမင်တွေပြည့်နေတယ်၊ ​​ရေလည်းများတယ်။
ကြွင်းသောအရာသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်နေစဉ်ဤနည်းအတိုင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားကောင်းလာနိုင်သည်။ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနှင့်ရေနှင့်အတူပါလာခြင်းဖြင့်သင်၏လည်ချောင်းကိုကုသနိုင်သည်။ မင်းတတ်နိုင်သမျှအနားယူဖို့ကြိုးစားပါ၊ လည်ပင်းကိုအသည်းအသန်နာကျင်စေပြီးသင့်ရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမပြန်ခင်မှာအပြည့်အဝပြန်လည်ကျန်းမာလာအောင်မလုပ်ပါနဲ့။
အမှုတစ်ခုစီ၌သင့်လျော်သောကုသမှုကိုမရရှိနိုင်ပါ Pharyngitis ကိုအဓိကပြproblemsနာများသို့ ဦး တည်သွားစေ နားရောဂါကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အကှေ့ကဲ့သို့။ ထို့ကြောင့်ကုသမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးကု၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လက်သည်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၊ အလွန်အေးသောသောက်စရာများရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်ပင်းကာကွယ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကိစ္စအများစုတွင်လည်ချောင်းကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်အချို့အခြေခံကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပြီး။ Pharyngitis ၏လက္ခဏာများကိုပြသသောလူများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အိမ်တွင်ကလေးများရှိပါက၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့နှင့်နီးကပ်လွန်းခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေသင့်သည်။ မျက်နှာဖုံးအသုံးပြုခြင်းအပြင်လက်သန့်ရှင်းမှုသည်သင့်မိသားစုအားဤနှင့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ရောဂါများ » pharyngitis ၏ရောဂါလက္ခဏာများ